ခွေးအသုံးအဆောင်များ - Mundo Perros | Dogs World (စာမျက်နှာ 2)
ခွေးများအတွက် chip သည်သင်၏ခွေးကိုဆုံးရှုံးလျှင်၎င်း၊ တိရိစ္ဆာန်မှတ်ပုံတင်တွင်ပါပြန်လည်ဆယ်တင်နိုင်ရန်အလွန်အကြံပြုသည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သူတို့ကိုတွေ့ရှိသည်။
သင့်မှာအသက်ကြီးတဲ့ခွေးတစ်ကောင်ရှိတယ်၊ ဒါမှမဟုတ်တင်ပါးဆုံရိုးနဲ့ဒူးပြသနာတွေပါ ၀ င်တဲ့မျိုးစိတ်ရှိရင်ဒီလှေကားတွေကမင်းကိုအများကြီးကူညီလိမ့်မယ်။ ဘယ်ဟာကိုရွေးမလဲ။
ခွေးကားထိုင်ခုံအကာအကွယ်ကိုရှာဖွေနေပါသလား။ အကောင်းဆုံးမော်ဒယ်များ၊ သူတို့၏အားသာချက်များ၊ အမျိုးအစားများနှင့်အခြားအရာများကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြသည်။
ခွေးရေပုလင်းကိုရှာနေသလား။ ဤ ၁၀၀% အကြံပြုထားသောပုံစံများဖြင့်လမ်းလျှောက်နေစဉ်သင်၏ခွေးကိုရေငတ်ခြင်းမှကာကွယ်ပါ။
ခွေးတွေအတွက်ကုတင်ကြီးတစ်လုံး ၀ ယ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်မင်းလိုအပ်တဲ့အရာအားလုံးကိုငါတို့ပြောလိမ့်မယ်။ ၎င်း၏အမျိုးအစားများမှ၎င်း၏အားသာချက်များနှင့်အခြားအရာများ
ခွေးများအတွက် Bibs: အရသာအားလုံးအတွက်
ခွေး၏ဆီးနံ့ကိုပျောက်စေသောပြဿနာများ။ အနံ့ဆိုးများကိုဖယ်ရှားရန်အိမ်တွင်းကုထုံးများနှင့် ၁၀၀% ထိရောက်သောထုတ်ကုန်အချို့ကိုသင်ထားခဲ့သည်။ သူတို့ကိုရှာဖွေပါ။
မင်းရဲ့ခွေးလေးကိုကလေးသုတ်နဲ့သုံးသလား။ အမှားကြီးပါ။ ဘာကြောင့်မလုပ်သင့်တာလဲ၊ ခွေးတွေအတွက်အကောင်းဆုံးအစိုသုတ်တဲ့အရာကဘာလဲ
ခွေးဝါးစားခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးအားလုံးကိုသင်သိပါသလား။ သူ့ရဲ့အားသာချက်များ၊ သွားပွတ်တံအမျိုးအစားများနှင့်သင်သိလိုသည့်အရာအားလုံးကိုပြောပြသည်။
မင်းဒီအလုပ်ကရိုးရှင်းမြန်ဆန်ပြီးနာကျင်စေတဲ့ခွေးလက်သည်းညှပ်ကိုရှာနေတာလား။ ကောင်းပြီ၊ ငါတို့မှာရှိတဲ့လမ်းညွှန်ကိုကြည့်ပါ။
မင်းခွေးကိုကားထဲခေါ်သွားရမလား၊ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိဘူး။ ၎င်းကိုလုံခြုံစွာသယ်ဆောင်ရန်နှင့်မှန်ကန်စွာမပြုလုပ်ပါကဒဏ်ငွေကိုရှောင်ရှားရန်မည်သို့ရှာဖွေပါ
မင်းခွေးအတွက်ချဉ်းကပ်လမ်းကမင်းရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အတွက်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာမင်းသိလား။ ၎င်း၏ကြီးမားသောအားသာချက်များ၊ အကောင်းဆုံးမော်ဒယ်များနှင့်သင်ဘာကြောင့်လိုအပ်သည်ကိုရှာဖွေပါ။
ခွေးအ ၀ တ်များ၊ အနွေးထည်အင်္ကျီများနှင့်အင်္ကျီများ
ခွေးငယ်များအတွက်အ ၀ တ်များသည်အလွန်အေးသောကြောင့်အခြားမျိုးများကဲ့သို့အကာအကွယ်မပေးသောကြောင့်အအေးမိသောအခါအလွန်အသုံးဝင်သည်။
လက်မပါသောသိုင်းကြိုး၊ canicross သို့မဟုတ်နေ့စဉ်သုံးအတွက်အသုံးအဆောင်တစ်ခုအကြောင်းသင်သိလိုသည့်အချက်အလက်အားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ဖော်သည်။
Julius K9 ကြိုးတပ်
မင်းရဲ့ခွေးအတွက် Julius K9 ကြိုးတစ်ချောင်း ၀ ယ်ဖို့စဉ်းစားနေလား။ ရွေးချယ်ရမည့်အချက်နှင့်စျေးသက်သာစွာသင် ၀ ယ်ယူသင့်သောအရာကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြသည်
ခွေးများအတွက်အကောင်းဆုံး antiparasites: မှုတ်ဆေး၊ ခေါင်းလျှော်ရည်နှင့်ကော်လာ
ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့သည်ခွေးများအတွက်အကောင်းဆုံး antiparasites များကိုရွေးချယ်ခဲ့ပြီးသင်လိုအပ်ချက်များနှင့်အကိုက်ညီဆုံးကိုရှာတွေ့နိုင်သည်။
Furminator သည်သင်၏ဘ ၀ ကိုပြောင်းလဲစေသောစုတ်တံဖြစ်သည်။ သင်နှင့်သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အတွက်ပြုလုပ်နိုင်သမျှ၎င်း၏အားသာချက်များကိုရှာဖွေပါ။ သင်ချစ်လိမ့်မည်။
မင်းရဲ့ခွေးကိုဘယ်အရိုးတွေပေးနိုင်လဲ။ ဤကစားစရာများနှင့်အဆာပြေများသည်သင့်သွားများကိုမည်သို့အကျိုးပြုသနည်း။ မင်းခွေးအရိုးတွေကိုရှာနေတယ်ဆိုရင်ဒါတွေကဒီမှာ
မင်းရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အတွက်မင်း ၀ ယ်နိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးခွေးခါးစည်းကငါတို့ကိုပြမယ်။ ဘယ်အမျိုးအစားတွေရှိလဲ၊ မင်းနဲ့အကိုက်ညီဆုံးကဘာလဲ။
သင်ရွေးချယ်သောခွေးကြီးများအတွက်မွေ့ရာများကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်တို့တွင်သင့်အတွက်များစွာရှိပြီးအကောင်းဆုံးကိုရွေးချယ်ရန်အကြံပြုချက်များရှိသည်။ ဖတ်ပါ။ သင်တွေ့ပါလိမ့်မည်။
အကောင်းဆုံးခွေးကစားစရာများကိုမည်သည့်နေရာတွင် ၀ ယ်ယူနိုင်သည်ကိုသင်စဉ်းစားမိပါကသင့်အတွက်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ပေးထားသည်။ ရှာဖွေပါ။
ခွေးများအတွက်အကောင်းဆုံးပြင်ပခွေးဂေဟာ ၆ လုံး
ခွေးများအတွက်အကောင်းဆုံးတံခါး ၅ လုံး
အကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ရေးခွေး tags များ
သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိသည့်ကြီးမားသောခွေးကြီးထွားလာသောလေယာဉ်တင်သင်္ဘောတစ်စင်းကိုသင်ရွေးချယ်လိုပါကကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ပေးထားသည်။ ကြည့်ရှု။ ကြည့်ရှုကြလော့။
သင်သည်သင်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အတွက်ခွေးအိမ်များကို ၀ ယ်ရန်စဉ်းစားနေပါကဤဆောင်းပါးတွင်အလွန်ကောင်းသောအိမ်ခုနစ်လုံးအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ပြောလိမ့်မည် ဆက်ဖတ်ပြီးရင်မင်းတွေ့လိမ့်မယ်။
ခွေးကြီးတွေအတွက်အိပ်ရာ ၀ ယ်ဖို့သင်စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်မင်းမှာမြင်းတစ်ကောင်လောက်ခွေးတစ်ကောင်ထက်မကငါတို့အတွက်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုလုပ်ထားတယ်။
Antiparasitic pipette သည်ဖောင်းပွလေးတစ်လုံးမျှသာဖြစ်ပြီး၎င်းတွင်အရည်ထဲတွင်ပါဝင်သောတက်ကြွသောအရည်များပါရှိသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ဘာကိုဆိုလိုသည်ကိုသင်သိလိုပါသလား။
သင့်တွင်ခွေးများစွာဟောင်နေသည့်ခွေးတစ်ကောင်တွင်ရှိလား၊ အခေါက်ဆန့်ကျင်သောကော်လာများကသင့်လျော်လျှင်သိရန်သင်စိတ်ဝင်စားပါသလား။ ဤဆောင်းပါးကိုလည်ပတ်ခြင်းဖြင့် ဝင်ရောက်၍ ရှာဖွေပါ။
Stronghold antiparasitic ရှာဖွေပါ
ခွေးနှင့်ကြောင်များတွင်ထိရောက်သော Stronghold antiparasitic အသုံးပြုရန်လိုအပ်သောလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပေးပါသည်။
Vetriderm လို့ခေါ်တဲ့ဆေးကဘာလဲ၊ ဘာအတွက်လဲ၊ ခွေးရဲ့ကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်အောင်ဘယ်လိုအခြေအနေမှာသုံးနိုင်တယ်ဆိုတာရှာဖွေပါ။ ရှာတွေ့သည် !!
အားလုံး Scalibor လည်ဆွဲအကြောင်းကို
Scalibor ကော်လာဆိုတာဘာလဲ၊ ဘာအတွက်လဲ၊ ခွေးရဲ့ကျန်းမာရေးကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဘယ်အခြေအနေမျိုးမှာသုံးနိုင်တယ်ဆိုတာရှာဖွေပါ။ ရှာဖွေပါ။
သင်၏ခွေးတစ်ကောင်သည်သူမည်သည့်နေရာတွင်ရှိနေသည်ကိုသင်သိရန်အတွက်အကောင်းဆုံး GPS ကိုသင်ရှာဖွေလိုပါကဤလမ်းညွှန်မှတစ်ဆင့်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုရှာဖွေပါ။
ဟယ်လိုဝိန်းမင်းလာနေပြီ။ မင်းခွေးကိုဝတ်ဆင်တာထက်ပျော်စရာဘာမှမရှိဘူးဆိုတာမင်းသေချာပေါက်ငါနဲ့အတူရှိနေမှာပါလား အကောင်းဆုံး ၀ တ်စုံများကို ၀ င ်၍ ရှာဖွေပါ။
လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ခွေးများအတွက်ဗီတာမင်များ ၀ ယ်ရန်လိုအပ်ပါသလား။ ၎င်းသည်အလွန်လွယ်ကူသည်၊ ဤလမ်းညွှန်ကိုကြည့်။ အကောင်းဆုံးဗီတာမင်များကိုရှာပါ။
သူတို့အဆင်ပြေပြီးလုံခြုံသည်ဟုခံစားရသောခွေးများအတွက်သင်ဘွတ်ဖိနပ်ဝယ်ဖို့လိုပါသလား။ အရမ်းလွယ်တယ်၊ ဒီလမ်းညွှန်ကိုကြည့်ပြီးအကောင်းဆုံးဘွတ်ဖိနပ်ကိုရှာပါ။
ဘယ်အချိန်မှာခွေးတစ်ကောင်အပေါ်တစ် ဦး နှုတ်ခမ်းကိုအသုံးပြုရန်?
ခွေးတွေကိုဝတ်ဖို့အကြံပြုလိုတယ်လား။ ဒီဆောင်းပါးမှာအဝတ်အစားတွေတကယ်ဝတ်သင့်မသင့်ဝတ်ဆင်သင့်မသင့်ကိုသိနိုင်မည့်အကြံပေးချက်များကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ တိရိစ္ဆာန်တွေကိုအဝတ်တွေဝတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီခွေးတွေကိုမလွမ်းပါနဲ့။
သင်သည်ခွေးလေ့ကျင့်ရေးကော်လာများအကြောင်းကိုကြားဖူးသော်လည်းသင်၏ခွေးနှင့်သင်အသုံးပြုရန်မသုံးသည်နှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်ရှင်းလင်းသည်။ အထဲ ဝင်၍ ထွက်ရှာပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များသည်မိသားစု ၀ င်များဖြစ်သဖြင့်၎င်းတို့ကိုခရစ်စမတ်လက်ဆောင်များတွင်ထည့်ရန်လိုသည်။ သို့သော်…
ခွေးအင်္ကျီတစ် ဦး ဗေဒရည်ရွယ်ချက်ရှိနိုင်ပါသည်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကာကွယ်ပေးသူတို့ရဲ့ function ကိုရှိသည်။
သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအတွက် Ikea Lurvig စုဆောင်းခြင်း
Ikea သည်ပထမဆုံးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအတွက် Lurvig၊ အိမ်မွေးစားရန်အတွက်အသုံးအဆောင်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသောစုဆောင်းထားသည့်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအတွက်အပြန်အလှန်ကစားနိုင်သောကစားစရာများသည် Tetris၊ Sudokus သို့မဟုတ် Puzzles ကဲ့သို့သောဗဟုသုတဂိမ်းများနှင့်တူညီသည်။
ခွေးကစားစရာများသည်အိမ်ရှိ furry ကောင်များအတွက်အလွန်ပျော်စရာကောင်းပြီးအခြားနည်းများဖြင့်လည်းသူတို့ကိုကူညီပေးနိုင်သည်။
Kyon Pet Tracker, ခွေးများအတွက်စမတ်ကော်လာ
Kyon Pet Tracker သည်ခွေးများအတွက်အဆင့်မြင့်နည်းပညာကော်လာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏အာရုံခံကိရိယာများမှတစ်ဆင့်တိရစ္ဆာန်၏စိတ်နှင့်လိုအပ်ချက်များကိုဖော်ပြသည်။
ကျွန်ုပ်၏ခွေးအတွက်အကောင်းဆုံးကော်လာကိုမည်သို့ရွေးရမည်ကိုသင်သိလိုပါသလော။ သင်စျေးကွက်တွင်သင်တွေ့ရှိရမည့်အမျိုးအစားများနှင့် ၄ င်းတို့၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြပါမည်။
ခွေးကိုဟယ်လိုဝင်းမှာ ၀ တ်ဆင်ဖို့အတွက်စိတ်ကူးတွေအများကြီးရှိတယ်၊ ဒါပေမဲ့အဲဒါကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေနိုင်လောက်အောင်ပျော်ဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်။
သူတို့ကမိုဘိုင်းနှင့်အတူခွေးနေရာချထားရန် GPS တစ်ခုဖန်တီးပါ
ဒီကော်လာမှာ Dondo GPS၊ ခွေးကိုမိုဘိုင်းဖုန်းနှင့်အတူအခမဲ့နေရာချထားရန်ခွင့်ပြုသည့်ကိရိယာတစ်ခုပါရှိသည်။
ခွေးကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်အနည်းဆုံးတစ်ပတ်လျှင်နှစ်ကြိမ်ပြုလုပ်သင့်ပြီးမှန်ကန်စွာရွေးချယ်ထားသော brush ကိုအသုံးပြုသင့်သည်။
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစိုးရိမ်စိတ်နှင့်အတူခွေးများအတွက်စိတ်ဖိစီးမှု Anti-stress အကျီ
ဆောင်း ဦး ရာသီ၌ခွေးအဘို့အအဝတ်အစား
ဆောင်း ဦး ရာသီ၌ခွေးများအတွက်အဝတ်များသည်တစ်ခါတစ်ရံအလွန်အေးခဲ။ မိုးရွာရွာမှလည်းကာကွယ်နိုင်သည်။
သင့်ရဲ့ခွေးကိုမှန်ကန် leash ရွေးချယ်ဖို့ဘယ်လို
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွေးအတွက်မှန်ကန်သော leash ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်အမြဲမလွယ်ကူပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်ခွေး၏ဇာတ်ကောင် (သို့) အရွယ်အစားစသည်တို့အပေါ်တွင်များစွာမူတည်သည်။
ခွေးတစ်ကောင်အတွက်ကစားစရာရွေးဖို့ဘယ်လိုသေချာမလဲ။ ဝင်ပါ။ သင်၏သူငယ်ချင်းနှင့်အတူမယုံနိုင်လောက်အောင်အချိန်လေးများကိုကုန်လွန်ရန်သင်မည်သည့်အရာကိုဝယ်သင့်သည်ကိုရှာဖွေပါ။
ခွေးများအတွက် GPS စနစ်
Garmin သည် ၁၄ မိနစ်ကီလိုမီတာအကွာတွင်ခွေး ၂၀ အထိစောင့်ကြည့်လေ့လာနိုင်ရန် GPS ကော်လာတစ်ခုကိုတီထွင်ခဲ့သည်။
ခွေးခံစားရသည့်အရာကိုဘာသာပြန်ပေးသည့်အံ့သြဖွယ်ကော်လာကိုရှာဖွေပါ။ Inupathy ကကျွန်တော်တို့ကိုခွေးရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုပြတဲ့ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတစ်ခုပါ။
ငါ့ခွေးအတွက် leash ရွေးရန်
ကျွန်တော့်ခွေးအတွက် leash ကိုဘယ်လိုရွေးရမလဲ။ ရိုက်ထည့်ပါ။ သင်၏ furry အတွက်အကောင်းဆုံးနှင့်မည်သည့်အမျိုးအစားများကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပြောပြလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်အလွန်အမင်းထင်ရသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့မည်သည့်ဇိမ်ခံပစ္စည်းကိုမျှမတတ်နိုင်သောကြောင့်၊ သူတို့၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များသည်အရာဝတ္ထုများ၊ အဲဒါကြောင့်
ခွေးနှင့် frisbee ကစားခြင်း
ကျနော်တို့ခွေးနှင့်အတူ frisbee သို့မဟုတ်ဒစ္စကို၏ဂိမ်းအကြိမ်ပေါင်းများစွာမြင်ကြပြီ။ ဒါဟာအရမ်းပျော်စရာအားကစားလိုပဲ။
ခွေးအိပ်ရာများကို pallets ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ရန်သင့်အားအကြံဥာဏ်အချို့ပေးသည်။ ခွေးသည်သူ၏ကိုယ်ပိုင်အာကာသရှိသည်ဖို့အဘို့ကြီးသောအပိုင်းပိုင်း။
သင့်ခွေး၏ကိုယ်ပိုင်အိပ်ရာရှိခြင်းနှင့်ပထမဆုံး နေ့မှစ၍ အိပ်ခြင်း၏အရေးကြီးပုံကိုကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးသည့်ဆောင်းပါး။
ဆွေးနွေးဟောင်းတစ်ကောင်မှ DIY ခွေးအိပ်ရာကိုမည်သို့ချရမည်ကိုရှာဖွေပါ။
အများဆုံးမူရင်း feeders ရှာဖွေတွေ့ရှိပါ
ဆောင်း ဦး ရာသီနှင့်ဆောင်းရာသီသည်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအတွက်ခက်ခဲနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့အတွက်ခွေးအဝတ်ကိုသင်ဝယ်ယူနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်သူတို့သည်အအေးမရှိကြပါ။
ကာရိုလိုင်းနားဟာရာရာသည် Dog Collection အသစ်တစ်ခုကိုစတင်ခဲ့သည်
ဒီဇိုင်နာကာရိုလိုင်းနား Herrera သည်သူမ၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအတွက်ဆောင်းပါးအမျိုးမျိုးနှင့်အတူသူမ၏ခွေးစုဆောင်းမှုအသစ်ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်တင်ပြခဲ့သည်။
ခွေးငယ်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အကြံပေးပါသည်။ ကျွမ်းကျင်သူများစွာကသင်ကော်လာများကိုဝတ်ဆင်သင့်ကြောင်း၊ သင့်အတွက်သမ္မာကျမ်းစာများသည်ဖယ်ရှားရန်ပိုမိုလွယ်ကူသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သင် visitors ည့်သည်များရောက်လာသောအခါသူတို့၏ခွေးကိုသော့ခတ်သူများထဲမှတစ် ဦး လော။ ဤအခြေအနေသည်အများအပြားအတွက်အလွန်ဂန္ထဝင်ပုံကိုပေးသည်။
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ခွေးများသည်အနှီးများ ၀ တ်ရန်လိုအပ်သည်။
Spas များသည်အသစ်အဆန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးခွေးပိုင်ရှင်များအကြားလက်ခံမှုများစွာရရှိထားပြီးဖြစ်သည်။ ဤအသစ်အဆန်းများသည်အလှကုန်နှင့်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းနယ်ပယ်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်လာသည်။
အဆိုပါ Elizabethan ကော်လာဝတ်ထား
ကွဲပြားခြားနားသောအချိန်များတွင်သင့်ခွေးကို Elizabethan ကော်လာဝတ်ဆင်ရပါလိမ့်မယ်။